सुजिता भण्डारी मृ’त्यु प्र’क’र’ण : हराएको २५ दिनपछि दे’वघा’टमा अ’न्त्य’ष्टि ! - Public 24Khabar
Home News सुजिता भण्डारी मृ’त्यु प्र’क’र’ण : हराएको २५ दिनपछि दे’वघा’टमा अ’न्त्य’ष्टि !
सुजिता भण्डारी मृ’त्यु प्र’क’र’ण : हराएको २५ दिनपछि दे’वघा’टमा अ’न्त्य’ष्टि !
गत असार २० गते जिल्लाको राप्ती नगरपालिकास्थित ब्रम्हस्थानी सामुदायिक वनको खो”ल्सामा ग’ले’को अवस्थामा श”व फेला परेकी सुजिता भण्डारीको श”वलाई आज आफन्तले बुझेर दा’ह सं’स्का’र गरेका छन्।
सुजिता असार ११ गते बिहानै घरबाट ह’रा’ए’की थिइन् । अ’प’ह’रणमा परेको भन्ने परिवारले दिएको सूचनाका आधारमा प्रहरीले सुजिताको खो’ज’त’ला’स गरिरहेको थियो । तर घरबाट निस्केको ९ दिनपछि असार २० गते आइतबार साँझ सुजिताको श’व जंगलमा भेटिएको थियो ।
यसअघि प्रहरीले खो’ज’त’ला’स नगर्दा ह”त्या भएको भन्दै दो’षी गि’र’फ्ता’र नहुँदासम्म श”व नबुझ्ने परिवार र स्थानीयले अ’डा’न लिएका थिए । ‘शनिबार मात्रै प्रशासन र परिवारका सदस्यबीच यो विषयमा छलफल भएको थियो । प्रशासनबाट आ’श्व’स्त भएर नै होला उहाँहरुले श”व बुझेर स’द’ग’द पनि गर्नुभयो,’ स्थानीय एक जनाले बताए।
सुजिताको असार २२ गते काठमाडौंको त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पो”स्ट”मा’म भएको थियो । शरीरमा ज्या’नै जा’ने घा”उ चो”टहरु नदेखिएपछि चिकित्सकले भि’से’रा परीक्षणका लागि नमुना पठाएका छन् । प्रहरी त्यही भि’से’राको रिपोर्टको प्रतिक्षामा छ ।
Previous articleभारतबाट आयो देउवालाई मोदीको फोन: मोदीले फोनबाटै यसोभनेपछि देउवाको यस्तो जवाफ !Pm deuba & Modi (भिडियो हेर्नुहोस)
Next articleमिस नेपालकि टप पाचौ प्रतिस्पर्धि थिइन चम्सुरि ,पहिले यस्तो अहिले यस्तो (हेर्नुस् भिडियो)